Fahazoan-dàlana ho fampandrosoana ny lozisialy malalaka sy misokatra: Fomba fanao tsara | Avy amin'ny Linux
Linux PostInstall | | soso-kevitra, maro
Una lisansa rindrambaiko, raha lazaina amin'ny ankapobeny, dia azo faritana ho a fifanarahana eo anelanelan'ny mpanoratra (mpamorona) tompon'ny zony hampiasa sy hizara ny vokatra noforonina ary ny mpividy na ny mpampiasa ny momba azy.
Noho izany, rehetra ny fahazoan-dàlana Amin'ny famaritana, izy ireo dia mampiditra ny fahatanterahan'ny andian- fampandrenesana napetraky ny mpanoratra (mpamorona). Izany hoe, a lisansa rindrambaiko, dia tsy inona fa ny zon'ny mampiasa ny programa iray eo ambanin'ny masontsivana eken'ny sasany.
1 Karazana fahazoan-dàlana lozisialy
1.1 Vokatra rindrambaiko maimaimpoana, izay tsy rindrambaiko malalaka na misokatra
1.2 Vokatra rindrambaiko manana sy ara-barotra
1.3 Karazana fahazoan-dàlana hafa momba ny lozisialy
1.4 Famaritana hafa mifandraika amin'izany
2 Rindrambaiko maimaim-poana sy fahazoan-dàlana Open Source
2.1 Rindrambaiko maimaim-poana
2.2 Loharano misokatra
3 Fomba fanao tsara
3.1 a) Manisy lisansa loharano misokatra
3.2 b) Manisy lisansa amin'ny antontan-taratasy
Karazana fahazoan-dàlana lozisialy
Amin'ny tranga sasany, fahazoan-dàlana rindrambaiko matetika mametraka ny fe-potoana maharitra hanana izany ianao, satria mety ho toy izany izy ireo maharitra na voafetra. Antony iray hafa izay mazàna mamolavola ny toetran'izy ireo dia ny sehatra geografika, izany hoe ny faritany izay hampiharana azy ireo fampandrenesana tafaorina; satria ny firenena tsirairay mazàna dia manana ny fitsipiny manokana momba izany lisansa rindrambaiko.
fahazoan-dalana samy hafa matetika izy ireo arakaraka ny karazana Rindrambaiko mba handrakofana, izany hoe ny karazana Lisansa sy / na Rindrambaiko tsirairay dia mamaritra ny iray hafa. Anisan'ireo fahazoan-dàlana sy / na lozisialy fantatra azontsika tononina:
Vokatra rindrambaiko maimaimpoana, izay tsy rindrambaiko malalaka na misokatra
Lisansa Abandonware: Io dia mamela ny mpampiasa hampiasa ilay rindrambaiko ao anaty fanjakana nilaozan'ny besinimaro (tsy misy zon'ny mpamorona rehetra) ary voamarin'ny mpanoratra azy. Manamora ny fahatsapana ny fanovana sy ny fizarana amin'ny hafa.
Lisansa Careware: Mamela ny mpampiasa zony mitovy amin'ny lisansa Freeware; fa manasa azy hanao fanomezana izay tsy terena na tsy misy fepetra, manohana ny fanomezana hanohanana ny asa maha-olona, ​​ny asa soa sy ny fanentanana hafa mifandraika amin'izany. Amin'ny ankapobeny mamela ny mpampiasa handika sy hanova azy tsy misy fetra.
Lisansa Crippleware: Io dia mamela ny mpampiasa hampiasa ilay rindrambaiko amin'ny kinova maivana (lite), izany hoe, miaraka amina fetra voafetra raha oharina amin'ny kinova feno na mandroso.
Lisansa fanomezana: Mamela ny mpampiasa zony mitovy amin'ny lisansa Freeware; fa manasa ny mitovy amin'izany mba hanao fanomezana tsy voatery na fanamafisana, hanohizana ny fampandrosoana ny fangatahana voalaza.
Lisansa freeware: Izy io dia mamela ny mpampiasa hanana zo malalaka hampiasa sy handika rindrambaiko araky ny teny nofaritan'ny mpanoratra ny programa voalaza nefa tsy avelany hisy ny fanovana na fivarotana ataon'ny antoko fahatelo.
Lisansa postcardware: Mamela ny mpampiasa zony mitovy amin'ny lisansa Freeware; fa manasa ny mitovy handefasana taratasy paositra, amin'ny fomba tsy mandidy na miantra, ho fanatsarana ny fivoaran'ny vokatra.
Lisansa Shareware: Mamela ny mpampiasa hampiasa ny lozisialy mandritra ny fotoana voafetra na maharitra, fa miaraka amina fiasa voafetra. Izay azo ampiasaina amin'ny fandoavam-bola ho an'ny kinova feno.
Vokatra rindrambaiko manana sy ara-barotra
Un Rindrambaiko fananana mazàna amin'ny alàlan'ny a a Rindrambaiko manana sy mihidy, satria mametra ny zon'ny mpamorona, fanovana ary fizarana indray mitovy amin'izany, raha tsy hoe ny mpampiasa farany (mpividy) dia mandoa vola amin'ny mpanoratra mba hanana zony hanao izany.
Mandritra a Rindrambaiko ara-barotra Manana fahazoan-dàlana manome maimaimpoana izy, ny fandoavana ny mitovy ampiasaina. Na izany aza, misy Rindrambaiko ara-barotra izay afaka maimaimpoana na fanananaaraka ny fisian'izany Rindrambaiko izay tsy maimaim-poana ary tsy ara-barotra.
Ankoatr'izay, amin'ny ambaratonga lehibe kokoa na tanteraka, fahazoan-dàlana rindrambaiko eo amin'ny sehatry ny Rindrambaiko manana, mihidy na ara-barotra Ireo dia azo raisina amin'ny drafitra isan-karazany, izay azontsika lazaina eto:
Fahazoan-dàlana ho an'ny volume (Boky)
Fahazoan-dàlana amin'ny antsipiriany momba ny vokatra (Antsinjarany)
Fahazoan-dàlana elektronika amin'ny vokatra manokana (OEM)
Ary koa, rehefa a Mpampiasa farany mazàna mahazo a Fahazoan-dàlana amin'ny antsipiriany fantatra matetika amin'ny hoe: Fifanarahana fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa farany (EULA) o Fifanarahana fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa farany (EULA). Amin'ny teny anglisy dia matetika no iantsoana azy Fifanarahana fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa farany (EULA).
Karazana fahazoan-dàlana hafa momba ny lozisialy
Avy amin'ny sehatra ho an'ny daholobe: Ilay tsy mampiditra singa ao amin'ny Copyright ary mamela ny fampiasana, ny fanaovana kopia, ny fanovana na ny fizarana fizarana hahazoana tombony na tsia.
Copyleft: Izay nampiasaina tamin'ny vokatra Free Software, izay tsy avelan'ny mpisera mpamatsy vola hametra fetra fanampiny rehefa manaparitaka na manova azy izy ireo, ka tsy maintsy maimaim-poana koa ilay kinova novaina.
Avy amin'ny rindrambaiko semi-maimaim-poana: Ilay ampiasaina amin'ny vokatra izay tsy Free Software, fa manome alalana ny fampiasana, ny fanaovana kopia, ny fizarana ary ny fanovana ho an'ny olona tsy mitady tombony.
Famaritana hafa mifandraika amin'izany
Patanty: Izy io dia napetraka ny zon'antoka tokana omen'ny governemanta na ny fahefana amin'ny mpamorona vokatra vaovao (azo tsapain-tanana na tsy azo tsapain-tanana) izay azo hararaotina amin'ny indostria ho tombontsoan'ny mpangataka mandritra ny fotoana voafetra.
Zon'ny mpamorona na zon'ny mpamorona: Endrika fiarovana natolotry ny lalàna manan-kery amin'ny ankamaroan'ny firenena ho an'ny mpanoratra ny sanganasa tany am-boalohany, anisan'izany ny asa soratra, tantara an-tsary, mozika, zavakanto ary ara-tsaina, izay navoaka na miandry ny famoahana.
Rindrambaiko maimaim-poana sy fahazoan-dàlana Open Source
El Free software dia ilay rindrambaiko manaja ny fahafahan'ny mpampiasa sy ny fiaraha-monina. Amin'ny ankapobeny, midika izany fa manana ny fahalalahana mihazakazaka, maka tahaka, mizara, mandalina, manova sy manatsara ny rindrambaiko.
Amin'ny tenim-pirenena hafa Free Software ary indrindra momba Fahazoan-dàlana nekena (voamarina / nekena) ny fahefana avo indrindra amin'izany dia ny Free Software Foundation (FSF). Ao amin'ny faritra natokana ho an'ny Fahazoan-dàlana nekena ary ao amin'ny fizarana ny Fahazoan-dàlana nekena o Lisitry ny fahazoan-dàlana (an'ny Software, Documentation ary asa hafa, mifanaraka na tsia amin'ny Fahazoan-dàlana ankapobeny (GPL), ary tsy maimaim-poana), ny Fikambanana GNU voatanisa amin'ny maro hafa, ireo voalaza etsy ambany ireo:
Ny lisansa GNU ankapobeny ho an'ny daholobe: Antsoina matetika hoe GPL - GNU, ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny programa GNU izy ary mihoatra ny antsasaky ny fonosana Free Software. Ny farany dia ny kinova nomerao 3, na dia mbola ampiasaina aza ny kinova 2 teo aloha.
Ny lisansa GNU Lesser General Public: LGPL - GNU no iantsoana azy matetika, ary ampiasaina amin'ny tranomboky GNU sasany (tsy izy rehetra). Ny farany dia ny kinova 3, na dia mbola ampiasaina aza ny kinova 2.1 teo aloha.
Fahazoan-dàlana ho an'ny daholobe Affero: Antsoina matetika hoe AGPL - GNU, miorina amin'ny GNU GPL izy io, saingy misy fehezan-teny fanampiny ahafahan'ny mpampiasa mifandray amin'ny programa manana fahazoan-dàlana amin'ny tambajotra iray hahazoana ny kaody loharano ho an'io programa io. Ny farany dia ny kinova 3.
Fahazoan-dàlana GNU Free Documentation: Antsoina hoe FDL - GNU na GFDL, io dia endrika Fahazoan-dàlana Copyleft natao ho an'ny boky fampianarana, boky na antontan-taratasy hafa. Ny tanjon'izany dia ny hiantohana ny fahafahan'ny tsirairay mandika sy mizara indray ny asa, na misy na tsy misy fanovana, ara-barotra na tsy ara-barotra. Ny farany dia ny laharana 1.3.
Ny lozisialy Loharano misokatra dia manondro lozisialy izay loharano loharano efa napetraka fandaharana maimaim-poana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ary omena fahazoan-dàlana izay manamora ny fampiasana azy indray na ny fampifanarahana azy amin'ny toe-javatra samihafa. Tsy mitovy amin'ny Free Software, satria ity farany miaro ny fahalalahan'ny mpampiasa sy ny vondrom-piarahamonina mampifangaro azy, raha ny Loharano misokatra manome lanja indrindra ny tombony azo ampiharina fa tsy ny fitsipiky ny fahalalahana atolotry ny Free Software.
Amin'ny tenim-pirenena hafa Loharano misokatra ary indrindra momba Fahazoan-dàlana nekena (voamarina / nekena) ny fahefana avo indrindra amin'izany dia ny Open Source Initiative (OSI). Ao amin'ny faritra natokana ho an'ny Fahazoan-dàlana nekena voatanisa amin'ny maro hafa, ireo voalaza etsy ambany ireo:
BSD - Andalana faha-3
FreeBSD - Andininy 2
Fahazoan-dàlana fampandrosoana sy fizarana iraisana
Eclipse kinova 2.0
OSI koa dia manana Lisitry ny Lisansa OSI miaraka amin'ny ekena rehetra. Maro amin'ireny Fahazoan-dàlana Open Source malaza, be mpampiasa na manana vondrom-piarahamonina matanjaka ary ankatoavin'ny Free Software Foundation (FSF).
Fomba fanao tsara
Ho an'ny lahatsoratray, naka ohatra iray izahay Fomba fanao tsara torontoronina ary nambaran'ny "Kaodim-panorohana ho an'ny fampandrosoana" do Banky Fampandrosoana Amerikana, eo amin'ny sehatry ny Rindrambaiko fahazoan-dàlana, izay tsy maintsy raisina rehefa mamolavola vokatra lozisialy (fitaovana nomerika), indrindra fa maimaim-poana sy misokatra.
teo anivon 'ny fomba fanao tsara natolotr'izy ireo, amin'ny resaka Rindrambaiko fahazoan-dàlana ireo voalaza etsy ambany ireo:
a) Manisy lisansa loharano misokatra
Raha mitanisa ny tolo-kevitrao dia izao:
"... MIT, izay manome fahalalahana ho an'ireo mpampiasa hafa raha toa ka manome ilay mpamorona tany am-boalohany izy ireo; ny fahazoan-dàlana Apache 2.0, tena mitovy amin'ny MIT saingy manome fanomezana mazava momba ny zon'ny patanty avy amin'ireo mpandray anjara ho an'ny mpampiasa; ary ny Fahazoan-dàlana GNU GPL, izay mitaky an'izay mizara kaody na asa niavian'ny olona nanao izany nefa mitazona ny loharano sy ny teny mitovy. Ireo mpandoa hetra dia manome fanomezana mazava momba ny zon'ny patanty".
b) Manisy lisansa amin'ny antontan-taratasy
"Amporisihinay ny fampiasana fahazoan-dàlana iraisan'ny mpamorona amin'ny fahazoan-dàlana ny antontan-taratasy momba ny fitaovana. ny CC0-1.0, CC-BY-4.0 ary CC-BY-SA-4.0 ohatra, izy ireo dia fahazoan-dàlana misokatra ampiasaina amin'ny fitaovana tsy lozisialy, manomboka amin'ny angon-drakitra ka hatramin'ny horonan-tsary. Mariho fa CC-BY-4.0 sy CC-BY-SA-4.0 tsy tokony hampiasaina amin'ny lozisialy izy ireo. Ho an'ireo fitaovana novolavolain'ny IDB amin'izao fotoana izao, dia ampirisihinay hampiasa ny Creative Commons IGO 3.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivative (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND)".
Farany, raha te hamaky ny anay ianao Lahatsoratra 2 mifandraika amin'izany Miaraka amin'ny lohahevitra dia avelanay anao ny rohy eto ambany: "Fomba fanao tsara hamoronana lozisialy malalaka sy misokatra: Documentation" y "Kalitao teknika: fomba fanao tsara amin'ny fampandrosoana ny lozisialy maimaimpoana".
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Buenas prácticas» eo amin'ny sehatry ny «Licencias» hampiasaina ho azy «Software libre y abierto» mandroso, tena mahaliana sy mahasoa ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahafinaritra sy goavambe ary mihamitombo ny fampiharana sy ny «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Fahazoan-dàlana ho fampandrosoana ny lozisialy malalaka sy misokatra: Fomba fanao tsara
ProtonVPN, safidy tsara hampiasana VPN amin'ny Linux